Ikhaya / izinto ezincedisayo / Izinto zokuthambisa egumbini lokuhlambela / Matte Black Single itawuli Hooks lokuhlambela
Inkqubo emnyama ye-Matte, eSylish kunye ne-exquisite ye-matte yenza ukuba umnini weTowel hook akhangeleke abe yimfashini kwaye azive ekhululekile.
I-Wall mount Matte Black Single Towel Hooks ngumxube ogqibeleleyo wale mihla, ubushelelezi kwaye ulula.it unokuyisebenzisa ukubopha ikhethini. Alsowork kakuhle eofisini ngokuxhoma iibhatyi, izipaji, iiambrela, njl njl. Igwegwe isebenza kakuhle ngazo zombini iingubo kunye iitawuli.
Umzimba wonke wakhiwe ngohlobo lwe-304 yebakala yentsimbi engenasici, kunye nomxholo ongezelelweyo we-18/10 weChromium / weNickel ukukhusela umhlwa kunye nomhlwa. 4 izaleko zokhuselo zongezwa kwi-stainless steel ye-304 ukuyenza yomelele ngakumbi kunye ne-Anti-Rust.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo SS304
I-anchor engabonakaliyo + ∅4 * 35mm Screw + hex key
SKU: 480106DB iindidi: Izinto zokuthambisa egumbini lokuhlambela, izinto ezincedisayo tags: Izinto zokuthambisa egumbini lokuhlambela, amagwegwe edyasi, KwiNtaba yeNdonga
I-9 × 7.5 × 5.5 cm
I-WOWOW I-Brass Ceramic Cartridge Replacement Cold ...
WOWOW Akukho Drill Kwindlu yangasese ephethe isiTshixo sebrawuza uNickel